सत्यमोहन जोशी | रिपोर्टर्स नेपाल रिपोर्टर्स नेपाल
Tag: सत्यमोहन जोशी
२५ सय दरको सिक्कामा सत्यमोहन
काठमाडौं, भदौ २५ । नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीको तस्बिर अंकित एक सय, एक हजार र दुई हजार पाँच सय दरका सिक्का सार्वजनिक गरेको
सत्यमोहन जोशीको तस्विरसहितको सिक्का सार्वजनिक
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीको तस्वीर अंकित १००, १००० र २,५०० दरका सिक्का सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मंगलबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा संस्कृतिविद्
अरनिकोले नेपाललाई चीनमा चिनाए
काठमाडौं ।वाङ्गमय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीले आजभन्दा ७०० वर्षअघि नै देशका विभूति अरनिकोले चीनमा गएर नेपालको कला, संस्कृति तथा बुद्धको चैत्यसम्बन्धी आफ्नो सिर्जनात्मक कला प्रस्तुत गरेर नेपाललाई चीनमा परिचित गराएको
ललितपुर महानगरद्धारा जन्मोत्सव आयोजना (फोटोफिचर)
काठमाडौं, ३० बैशाख । सत्यमोहन जोशी सय वर्ष पुगेको अवसरमा ललितपुर महानगरपालिकाले सोमबार जन्मशताब्दी महोत्सव आयोजना गरेको छ । ललितपुर मेयर चिरिबाबु महर्जनको अगुवाइमा जोशीलाई मंगलबजारबाट रथारोहण गराई बाजागाजासहित नगर
काठमाडौं, ३० बैशाख । शताब्दी पुरुष संस्कृतविद् सत्यमोहन जोशी वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग रिसाएका छन् । शनिबार प्राइम टाईम्स टेलिभिजनबाट प्रशारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँगको
काठमाडौं ३० बैशाख । शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको एक सयौं जन्मोत्सवमा सोमबार ललितपुर महानगरपालिकाले विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्दै छ । जोशीलाई बग्गीमा राखेर मंगलबजारदेखि ईटी, कुमारीपाटी, जाउलाखेल हुँदै पुल्चोक पुर्‍याउने
काठमाडौं २९ बैशाख । ८१ वर्ष भइसकेछ वाङमय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशी र राधादेवीको दाम्पत्य। जिन्दगीको सहयात्रा थाल्दा सत्यमोहन १९ वर्षका थिए र राधा १४ वर्षकी। उमेरले शताब्दी टेक्दासम्म झगडा
ओलीसँग किन रिसाए सत्यमोहन जोशी ? (भिडियोसहित)
काठमाडौं, २८ बैशाख । शताब्दी पुरुष संस्कृतविद् सत्यमोहन जोशी वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग रिसाएका छन् । शनिबार प्राइम टाईम्स टेलिभिजनबाट प्रशारण भएको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँगको
सत्यमोहन जोशीको सम्मानमा बिदा दिइने
काठमाडौं १७ बैशाख । ललितपुर महानगरपालिकाले शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको सम्मानमा वैशाख ३० गते सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेको छ। ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले सार्वजनिक बिदा दिने जानकारी सोमबार दिए।
ललितपुर महानगरपालिकाले वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको जन्मशताब्दी एक सय वर्षको जन्मदिन वर्षभर नै विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेर मनाउने भएको छ । जोशीलाई नगर परिक्रमा, गोसाइँकुण्ड दर्शन गराउनेसँगै नगरभित्र विभिन्न